Bishan gudaheeda Edge-ka Webka Raadiyaha, Waxaan ku dhex soconeynaa istiraatiijiyad mushaar halkii gujis, waxaan ka hadlaynaa kiisaska isticmaalka, iyo bixinta tan tirakoobyo iyo macluumaad ah. Suuqyayaashu waxay aqoonsan yihiin qiimaha cajiibka ah ee ay ku bixinayso hal guji kasta oo suuqgeyn ah waxay ku guuleysan kartaa dhismaha wacyigelinta marka aadan haysan awoodda raadinta, helitaanka jihooyinka, iyo soo qabashada dhagaystayaasha khuseeya ee diyaar u ah inay sameeyaan iibsigooda soo socda.
Waxaan markaa ku soo koobaynaa diiradda waxa qeexitaanka isku dayay waa oo sii wadaa khaladka xeeladaha la geeyay. Daacad ayaan u noqon doonaa taas oo ah ma arkin hal macmiil oo ku guuldaraysanaya inuu adeegsado mushaharka gujinta markii ololayaasha la kormeero, si fiican loo fuliyo, loo tijaabiyo, loona soo sheego si sax ah. Waa kuwan sababaha aan u aragnay PPC oo fashilmay:
Ballanqaadka - Macaamiilku waxay rabaan inay biyaha ku tijaabiyaan PPC laakiin ma doonayaan inay dhammaantood galaan, waxaa laga yaabaa inay rabaan inay lacag ka helaan $ 100 kuuboon ah oo ay ku heleen boosta. Si kastaba ha noqotee, miisaaniyadda bilowga ah waa mid aad u yar oo aysan haysan wax ku filan oo ay ku tijaabiyaan iskudhafka ereyada muhiimka ah, ka reebaan ereyada aan khuseyn, iyo helitaanka hagitaanno ku filan si ay u abuuraan dareen ah in dhibcaha tayada ay soo fiicnaanayaan iyo xeeladaha muhiimka ah ee loo adeegsado. Maalgashigaaga hore wuxuu ubaahanyahay inuu si aad ah uga baaxad weynyahay qarashkaaga billaha ah ee lafilayo inaad kubixiso PPC si loo tijaabiyo, loo cabbiro, loo hagaajiyo loona dejiyo waxyaabaha laga filaayo qiimahaaga halkii hogaamiye, tayada hogaaminta, iyo qiimaha bedelka PPC maahan hal olole ama mashruuc, waa hanaan lagu horumarin karo waqti ka dib waxayna u baahan tahay maamul shaqaale tayo leh.
Ikhtiyaarrada Beddelka - Qof kastaa ma doonayo inuu wax ka iibsado ad PPC-ka guji. Qaarkood waxay ku jiraan xilli hore go'aan qaadashadooda waxayna rabaan inay cilmi baaris sameeyaan. Bixinta ikhtiyaarrada si aad isugu qorto, u soo dejiso warqad cad, u qorto mudaaharaad, ama ikhtiyaarrada kale dhammaantood waa beddelaadyo u horseedi kara isticmaale raadinta booqde ku hawlan. Sababtoo ah ma aysan saxeexin macnaheedu maahan inaysan u socon sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad la socoto dhaqdhaqaaqyada kale ee horseedaya beddelaad. Ma ogtahay inta macaamiishaadu ka bilaabeen soo dejinta warqad cad? Mise rukumo email ah? Soo ogow si aad uga dhigi karto qaar ka mid ah dalabyadaas ololahaaga PPC.
Raadinta Ololaha oo liita - Marwalba waan layaabaa markay shirkaduhu leeyihiin hal bog oo soo degitaan ah oo u furan taraafikada dabiiciga ah iyo kuwa lacagta la siinayo, laakiin ma haystaan ​​wax olole ah oo ay ku kala soocaan labadooda Analytics. Si kale haddii loo dhigo, PPC waxay noqon kartaa istiraatiijiyad weyn - si fudud uma sheegi karaan iyagoo fiirinaya tooda Analytics. Hel hay'ad ka caawisa qaabeynta Analytics si sax ah si aad si sax ah u cabbiri karto guusha ololahaaga.
Looma Raadinayo Telefoon - Ganacsi kasta waa inuu lahaadaa Falanqaynta-isku-dhafan wicitaan-raadinta boggooda. Maaddaama adduunku socdo, dad aad u tiro badan ayaa ka boodaya daawashada fiidiyowga ama akhrinaya warqadda cad oo si fudud u garaacaya lambarka taleefanka. Waxaan leenahay macaamiil si khalad ah u kala sooca dadaalladooda suuq-geynta waxayna u yeelaan dhammaan wicitaannada taleefannada warbaahinta caadiga ah sida telefishanka iyo raadiyaha. In kasta oo qeybahaas ay WADA wicitaanno wadaan, waxaan ognahay in ololahooda lacag-bixinta ee mushaarka bixiya ay sidoo kale mudan yihiin in lagu ammaano in badan oo ka mid ah taraafikada taleefannadooda laakiin ma cabbiri karno illaa ay maalgashi ku xalliyaan.
Tijaabo la'aan - Ku dhajinta bogga degitaanka si fudud kuma filna. Midabka badhanka ama xitaa jihada indhaha qofka ee sawirka sawir kaydka ah ayaa saamayn ku yeelan kara heerka beddelaadda ee bogga soo degitaanka. Tijaabinta Bogga Soo Degitaanka waa cunsur muhiim u ah mushahar kasta halkii olole ee aad riixdo. Waa inaad tijaabisaa dhammaan walxaha si aad u hagaajiso CTR iyo guud ahaan ROI ee ololayaashaaga lacagta lagu bixiyo.
Mawduuc liita - Dhibcaha tayada ayaa sidoo kale ku lug leh tayada waxyaabaha ku jira boggaaga soo degista iyo beddelaadyada ayaa gabi ahaanba saameyn ku yeeshay tayada macluumaadka goobtaada oo dhan. Dhowr dhibcood oo rasaas ah ma goynayaan. Fiidiyowyo, markhaatiyo, kiisaska isticmaalka, xogta taageerta, astaamaha macmiilka, sawir shaqaale… waxyaabaha aad u baahan tahay ayaa ku qasbaya booqdaha inuu ku kalsoonaado inay heli karaan macluumaadka ay u baahan yihiin markay buuxiyaan foomkaaga.
Yoolal La'aan - Waxaan dhawaanahan helnay rajo aan runti ku faraxsanahay inuu qeexay hadafyada - wuxuu doonayay inuu ku soo celiyo 7: 1 ololihiisa lacag bixinta. Fahamka hadafka, heerka beddelka, iyo celceliska waqtiga loo beddelayo waxay ka caawineysaa hay'addaada PPC inay fahamto nooca dalabka ay u baahan yihiin inay soo saaraan, lacagta ay tahay inay ku bixiyaan halkii hoggaan, iyo muddada ay hoggaamiyeyaashaas qaadan doonaan inay beddelaan. Waxay awood u yeelan doonaan inay ku hagaajiyaan ololahaaga si waafaqsan waxayna kaa caawin karaan inaad go'aamiso miisaaniyad lagu guuleysto.
Waad ku mahadsan tahay Erin at Istaraatiijiyadda Goobta si looga wada hadlo qaar ka mid ah tilmaamahan - hubi inaad la socoto Edge-ka Webka Raadiyaha oo naga dhageyso Stitcher, BlogTalkRadio, iTunes, Suuq-geynta ama mid ka mid ah kanaalada kale ee wax loo qaybiyo!